သတိပြုဖွယ် လျှပ်စစ်အန္တရာယ် (၉)
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကြောင့် လျှပ်စစ်အန္တရာယ် ဖြစ်ပေါ်မှုဖြစ်စဉ်များတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်း များ ပြုပြင်ရာတွင် လည်းကောင်း၊ ဓာတ်အားလိုင်းအနီး လူ၊ ပစ္စည်းများ ဝင်ရောက်ရာတွင် လည်းကောင်း၊ စက်ကွင်းအတွင်းတွင် ကျရောက်၍ ဓာတ်လိုက်ခြင်း ဖြစ်စဉ်များသည် ပဉ္စမအများဆုံး ဖြစ်ပါသည်။ ဤနေရာတွင် လျှပ်စစ်စက်ကွင်းဟူသော အဓိပ္ပာယ် နှင့် လျှပ်စစ်စက်ကွင်း ဖြစ်ပေါ်မှုကို ပြည်သူအများ သိရှိရန် သိသာထင်ရှားအောင် ရှင်းပြမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် မီးတောက်၊ မီးလျှံများ၏ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် အပူဓာတ် ရှိနေသည်ကို သတိပြုမိကြမည် ဖြစ်ပါသည်။ မီးတောက်၊ မီးလျှံနှင့် နီးလေ အပူဓာတ်ပိုမို ခံစားရမည် ဖြစ်ပါသည်။ မီးတောက်၊ မီးလျှံ၏ ပတ်လည် အကွာအဝေးတစ်ခုအထိ အပူဓာတ်ရှိနေပြီး မီးတောက်နှင့် နီးလေ အပူဓာတ် ပိုမိုခံစားရလေဖြစ်သည်။ မီးနှင့် လူမထိမိသော်လည်း မီးပတ်လည် အပူစက်ကွင်းအတွင်း ရောက်ရှိပါက အပူဓာတ် ခံစားရခြင်း၊ မီးအပူလောင်ခံရခြင်းများ ခံစားရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ဖယောင်းတိုင်မီး၏ အပူစက်ကွင်း သည် ၁ လက်မ၊ မီးသွေးမီးဖို၏ အပူစက်ကွင်းသည် ၁ ပေခန့်၊ မီးပုံကပွဲ ကျင်းပသော ထင်းမီးဖိုတွင် ၁၀ ပေကျော်ခန့်အထိ အပူစက်ကွင်း ရှိပြီး အပူဓာတ်ခံစားရမည် ဖြစ်ပါသည်။ အိမ်များ မီးလောင်လျှင်ကား အပူစက်ကွင်းသည် အခြားအိမ်အထိ ရောက်ကာ မီးတောက်ကူးစက် လောင်ကျွမ်းကြောင်းကို တွေ့ရှိ ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
သတိပြုဖွယ် လျှပ်စစ်အန္တရာယ် (၈)
ဓာတ်အားလိုင်းကြိုးများ နိမ့်ကျခြင်း၊ ဓာတ်အားလိုင်းကြိုးများ ပြုတ်ကျခြင်းများကြောင့် လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ဖြင့် အသက်ဆုံးရှုံးမှု ဖြစ်စဉ်များသည် လူသိများသော ဖြစ်စဉ်များ ဖြစ်ပါသည်။ လျှပ်စစ်အန္တရာယ် ဖြစ်ပွားမှုဖြစ်စဉ်များတွင် စတုတ္တအများဆုံးဖြစ်ပါသည်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်းကြိုး ပြုတ်ကျမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် ဓာတ်လိုက်မှုဖြစ်စဉ်များအနက်မှ အချို့ကို ဖော်ပြရပါက-
သတိပြုဖွယ် လျှပ်စစ်အန္တရာယ် (၇)
သတင်းစာမှာ ဆားဗစ်ကြိုးတွေကြောင့် ဓာတ်လိုက်မှုအကြောင်း ဖတ်လိုက်ရတော့ မနှစ်က တို့အိမ့်ရှေ့အိမ်က မိန်းမကြီးတစ်ဦး သစ်ကိုင်းကျိုးကျပြီး ဆားဗစ်ကြိုးလျော့ကျနေတာကို သွားကိုင်မိလို့ ဓာတ်လိုက်ပြီး အသက်ဆုံးရှုံးရတဲ့ ဖြစ်ရပ်ပြန်မြင်လာမိတယ်……နှစ်ပေါင်းကြာမြင့်စွာ သုံးစွဲခဲ့တဲ့ကြိုး ဆိုတော့ ပေါက်ပြဲနေတာကနေ ဓာတ်လိုက်မှုဖြစ်တာ ….. လူတိုင်း လျှပ်စစ်အန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့ အချက် တွေကိုသိရှိပြီး လိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့လိုကြောင်း မိတ်ဆွေတစ်ဦး ပြောကြားလာပါသည်….. ဆားဗစ်ကြိုးတွေကြောင့် ဓာတ်လိုက်မှုဖြစ်စဉ်တွေ တစ်နှစ်ကို အရေအတွက် ဘယ်လောက်ရှိသလဲ….?
သတိပြုဖွယ် လျှပ်စစ်အန္တရာယ် (၆)
လျှပ်စစ်အန္တရာယ် သတိပြုနိုင်ရန်အတွက် ဓာတ်လိုက်မှု ဖြစ်စဉ်များတွင် “Service ကြိုးကြောင့် ဓာတ်လိုက်ခြင်း” သည် တတိယ အများဆုံးဖြစ်ပါသည်။ ဆားဗစ်ကြိုး (Service Wire) သည် ဓာတ်အားလိုင်းတိုင်မှ အိမ်သို့ ဆွဲထားသော ဝါယာကြိုးကို ခေါ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်.... အိမ်တစ်လုံး အသုံးပြုသော လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသည် ဆားဗစ်ကြိုးမှ ဖြတ်စီးခြင်းကြောင့် ဆားဗစ်ကြိုးသည် အိမ်တွင်း သုံးကြိုးအားလုံးထက် ပိုကြီးသော အရွယ်အစားကိုအသုံးပြုကြရပါသည်။ အိမ်တစ်အိမ်အတွက် ဆားဗစ် ကြိုးအရွယ်အစားရွေးချယ် တပ်ဆင်ရာတွင် တစ်အိမ်လုံး၌ အသုံးပြုသော လျှပ်စစ်ပစ္စည်းအားလုံး၏ ဝန်အားပြည့် လျှပ်စီး (Ampere) ပေါ် မူတည်၍ တွက်ချက်တပ်ဆင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
သတိပြုဖွယ် လျှပ်စစ်အန္တရာယ် (၅)
"သတိပြုဖွယ် လျှပ်စစ်အန္တရာယ် " ဆောင်းပါးများတွင် ရေးသားဖော်ပြခဲ့သည်ကို ဖတ်မိသော တပည့်မ တစ်ဦးက " အိမ်က မိဘတွေ ၊ ကလေးတွေအတွက် လျှပ်စစ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိုးရိမ် ပူပန်စိတ်တွေ ဖြစ်လာတယ် ဆရာ…… အဲဒါနဲ့ အိမ်တွင်းဝါယာကြိုးတွေနဲ့ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေကို လျှပ်စစ်အန္တရာယ် ရှိ-မရှိ ရပ်ကွက်ထဲက လျှပ်စစ်နားလည်တဲ့သူကို ခေါ်ပြီး စစ်ဆေးခိုင်းရတယ် …. ကွဲအက်နေတဲ့ မီးပလပ်ပေါက် နှစ်ခုကိုလည်း အမျိုးအစား ကောင်းတာနဲ့ ချက်ချင်း လဲပစ်လိုက်တယ် …. မိသားစုဝင်တွေကိုလည်း လျှပ်စစ်အန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေး လက်ကမ်းစာစောင်ပါ အချက်တွေကို အသေအချာ ရှင်းပြခဲ့တယ် …."